विदेशको बसाईको वास्तविकता तिनलाई मात्र थाहा छ – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:18:26
जापानी समय : 03:33:26
8 August, 2017 00:06 | बिचार | comments | 136350 Views
परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउछ कसलाई के थाहा भयो र रु आज ठीक भएको परिस्थिति बिग्रिन कति नै समय लाग्दोरहेछ ? साँझ छोरासँग कुरा गरेको उसको बाबा छिटै घर फर्किने बचन दिएकी उसको श्रीमती, दुख सुखको कुरा गरेको उसको आमा, भावना साटेका उसको आफन्त साथीभाइहरु नयाँ दिनको आगमनले यसरी स्तब्ध बनाउला भनेर कसले कल्पना गरेको थियो होला र ?
ठूला ठूला सपना बोकेको उसले आफ्ना सपना पूरा गर्ने जमर्को गर्दागर्दै बिदेशिन पुगेको उ हरेक मिनेट मृत्‍युसंग लडिरहेको छ । ४५ डिग्रीको तातो घाममा काम गरिरहेको हुन्छ र पनि तिनै परिवार, आफन्त , साथीभाइलाई पटकौ सम्झिरहेको हुन्छ । तिनै पुराना यादहरुले उसलाई तातो घाममा पनि केही शितलता महसुश गराएको हुन्छ ।
पर्याप्त रोजगारी नहुँदा बिदेशिनु स्वाभाविक भैसकेको हाम्रो देशमा हरेक दिन सयौ युवा बिदेशिन बाध्य छन् । लोकतन्त्रपछि गणतन्त्र आइसकेको मेरो देशमा लुटतन्त्रभन्दा अरु केही भेटिदैन, सामाजिक काम गर्दा होस् या सरकारी काम गर्दा होस् जहाँ पनि लुट मात्रै । भागबण्डा नमिलेकै कारण यहाँ सदियौका साथीभाइ सम्बन्ध टुट्टाउन पछि पर्दैनन् । देश धमिरोभन्दा ठूलो किराले खाइसक्यो । यसरी भन्दा विदेश बसेर खुब देशभक्ति देखाउँछ, छेउ न टुप्पोको कुरा गर्छ भन्ने लाग्छ नेपालमा साथीहरुलार्इ तर यही छेउ न टुप्पोको कुराहरु प्रदेशमा बसेर धेरै आउँदो रैछ अझ धेरै देशभक्ति जाग्दो रैछ ।
फेसबुकमा च्याट गरेर युटुबमा भिडियो हेरेर समय बिताउँछ्न हाम्रो देशका कर्मचारीहरु त्यति मात्रै कहाँ हो सबैभन्दा धेरै राजनीति तिनैले जानेका छन । भ्रस्टाचार नहोस भनेर सरकारले बर्षपिच्छे तलब बढाउँछ तर काम गरिदिएबापत घुस चाहिन्छ । नापीमा गयो कर्मचारी नै जग्गाको दलाल छन सेवाग्राही घन्टौ लाइनमा हुन्छन काम बन्दैन, यातायातमा गयो तेस्तै, मालपोतका कर्मचारीलाई सधै मालामाल, भन्सारका कर्मचारीले धन्सार भरे जनतालाई सधै लोप्पा मात्रै खुवाउने ?
यो सानो उदाहरण मात्रै हो । यस्तै अरु पनि थुप्रै साना साना कुराहरु छन् जसलाई हेर्ने कुनै निकाय छैन किनकि भएको निकाय सबै निस्क्रिय छन् । साँच्चिकै देशको विकास गर्ने हो भने पहिले कर्मचारीलार्इ चुस्त बनाउनु पर्छ । भ्रस्टाचार किन हुन्छ ? कसरी घट्छ ? यस्ता बहस खुब चल्ने गर्छ । एक दुर्इ जनालाइ समातेर, सडकमा केही सय मान्छे जम्मा भएर भ्रस्टाचारको बिरोध गरेर भ्रस्टाचारीलार्इ किरा परोस भनेर सरापेर पनि भ्रस्टाचार निर्मुल हुँदैन । भ्रस्टाचार हटाउने हो भने मान्छे र पैसाको भेट हुनु हुँदैन त्यसको लागि धेरै प्रबिधि बनेका छन् । विश्वमा प्रयोग गरेर हेरौ, प्रबिधि भित्राउ ।
देश आयातमा निर्भर छ र त्यो आयात रेमिट्यान्सले धानेको छ । त्यही किसानले उत्पादन गर्छ त्यही किसनको छोरो विदेशमा छ । अब हेरौ देश कसले धानेको छ ? गाउँमा मान्छे मर्दा संस्कार गर्ने मान्छे छैन । बुढाबुढी, महिला, केटाकेटीले के गर्ने ? परिवर्तन गाउँगाउँबाट थालनी गरौं ।
जनताले विकास देख्न चाहन्छन, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न चाहन्छन । राम्रो काम गर्दै गए भने कसले नराम्रो भन्छ नेतालाई ? बुझेको पढेलेखेकोले पक्कै भन्दैन । नेता र नेतृत्वमा बसेकाहरु मिडियामुखीभन्दा पनि जनतामुखी हुनुपर्छ ।
तेल हाल्न सकिदैन भने मोटरसाइकल नचडे पनि हुन्छ, किन चडिनस् भनेर कसैले सोध्दैन । सधै बाको खल्ती मात्रै ताक्ने काम पनि राम्रो होइन । स्वावलम्बी देशमै पनि बन्न सकिन्छ । जत्ति छ रमाउने कोसिस गरौ । विदेश विदेश भनेर ऋण खोजेर, जग्गा धितो राखेर बेकारको भारि नबोकौं । विदेशमा त्यस्तो केही छैन जुन तपाईंहरुले सोच्नु भएको छ । १८ घण्टा काम गर्दा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ । बस वातावरण नबनेको मात्रै हो । वातावरण बनाउन पहल गरौं । बिदेशीन प्रोत्साहन भन्दा पनि बिदेशिएका युवालार्इ फर्काउने तर्फ सोचौ । अब पनि यसरी बिदेशिन वाध्य हुनु नपरोस । बिदेशी भूमिमा उर्जाशील जीवन व्यतीत गर्न कसैले चाहेको छैन् । म र मजस्ता हजारौ युवा छिटै फर्किन चाहेको छन । बन्द उद्योग, कलकारखाना खुलाउन पहल गरौं खाली भारत र चीनको दोहोरी नखेलौं ।
बिदेश अब भिजिटिंग भिसामा जाने हो भनेर सोचौं । केही छोप्नु छैन बिदेशमा । घर, परिवार, साथीभाइ, समाजबाट टाढा भएर बिरानो मुलुकमा पसिना बगाउनेलार्इ मात्र थाहा छ विदेशको वास्तविकता ।
(हाल जापान टोकियो)
सात ‘अ’ को शिकार महिला
प्रातःस्मणीय विष्णु सर, जसका शब्दहरु अहिले पनि गुञ्जिइरहेछ
शान्ति स्थापना गर्न राष्ट्रसंघ असफल
ओरालो बाटोमा जापानका नेपाली ब्यवसायीहरु
ओली-मधेशी नेताको सम्बन्ध : विगत सम्झदा र अहिले देख्दा
ज्ञानेन्द्र शाहकाे अात्मवृत्तान्त अाए दिल्ली-वासिङ्टनकाे समेत साताे जानेछ